धुर्मुस–सुन्तलीको यात्रालाई नै ‘टर्न’ गर्ने भूकम्प, त्यसपछि जन्मियो फाउन्डेसन !
काठमाडौं – २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प जाँदा हाँस्य कलाकार जोडी सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) कार्यक्रमको शिलशिलामा अमेरिकामा थिए ।
अमेरिकाको एक राज्यमा कार्यक्रम सकेर भोलिपल्ट बिहानै अर्को राज्यमा जाने उनीहरूको तयारी थियो ।
भोलिको योजना बनाएर उनीहरू सुतिसकेका थिए । दिनभरको कार्यक्रमले थकित धुर्मुस–सुन्तली निदाएको १ घण्टा पनि पुगेको थिएन । कुञ्जनाको मोबाइलमा आएको फोनले ब्यूझिए ।
अस्ट्रेलियामा रहेकी बहिनीले नेपालमा भूकम्प गएको जानकारी दिन कुञ्जनालाई फोन गरेर दिइन् । ‘नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो रे ! धरहरा पनि ठल्यो रे ! सबै तहसनहस भयो रे ! भनेर बहिनीले भनेपछि हामी धेरै आत्तियौं,’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा सीतारामले सम्झिए ।
धुर्मुस–सुन्तली जोडीको मन साह्रै आत्तियो । दुवैले नेपालमा रहेकी सानी छोरी सम्झिए, परिवार सम्झिए, घर परिवारका सदस्यबारे जानकारी लिन आतुर भए । टेलिभिजनमा भूकम्पले काठमाडौं तहसनहस भएको दृश्य प्रसारण भइरहेका थिए । उनीहरू नेपालमा फोन सम्पर्क गरिरहे तर सम्पर्क हुन सकिरहेको थिएन ।
सीताराम सम्झन्छन्, ‘धेरै समयपछि बल्ल फोन लाग्यो र परिवारका सबै सदस्य सुरक्षित रहेको जानकारी पाएपछि बल्ल ढुक्क भयौं ।’ तर मानिसले ज्यान गुमाएका, घाइते भएका, धरहरा, घर लगायतका संरचना ढलेका कहालीलाग्दा दृश्य देखेर मन पोलिरहेको थियो ।
‘भूकम्पका ती दृश्यले हामीलाई झक्झकाएको थियो । जसले हामीलाई धुर्मुस–सुन्तली बनाउनुभयो, आज उहाँहरू पीडामा रहेको अवस्थामा हाम्रो उपस्थिति नै उहाँहरूका लागि राहात हुन्छ भन्ने लाग्यो,’ ४ वर्षअघिको कुरा सम्झिँदै सीतारामले लोकान्तरसँग साटे ।
अमेरिकामा रहँदै उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोगका लागि अपिल गरे, लगत्तै भूकम्प पीडितको सेवामा जुट्नुपर्छ भन्ने सोचले अमेरिकाको १ महिनाको कार्यक्रम स्थगित गरेर स्वदेश फर्किए ।
नेपाल आएपछि परिवार आफन्तलाई भेटे । सोही दिन साँझबाटै भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि छलफल गरे । भोलिपल्ट दुवै जना राहत सामाग्री लिएर नुवाकोट पुगे ।
त्यसपश्चात् विभिन्न जिल्लामा चर्पी निर्माण, विद्यालय निर्माण गर्दै एकीकृत नमूना बस्ती निर्माणको अवधारणा अन्तर्गत रातदिन भूकम्प पीडितको उद्धार र राहातमा अथवा बस्ती विकासमा अगाडि बढे ।
सामाजिक संस्थामार्फत काम गर्न धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन स्थापना गरियो । अहिले पनि दुवै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनमार्फत समाज सेवामा सक्रिय छन् ।
कहिले बाढीपीडितको उद्धार तथा राहातमा पुगे त अस्ती भर्खर बारा–पर्सामा आँधीहुरी प्रभावितको उद्धार तथा राहातमा पनि सक्रिय रहे । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले अहिले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्दैछ ।
आज बिहीवार भूकम्प गएको ठीक ४ वर्ष पूरा भएको छ, जुन घटनाले कलाकार जोडीको यात्रालाई नै ‘टर्न’ गरिदियो । आज उनीहरू कलाकारिता कम, सामाजिक काममा बढी सक्रिय छन् ।
सीताराम र कुञ्जनालाई सरकारले २०७१ सालमा सरसफाई दूत बनाएको थियो । उनीहरू सरसफाईका काममा सक्रिय भएर अगाडि बढिरहेका थिए । तर भूकम्पपछि उनीहरूले कलाकारितालाई केही पर धकेलेका छन् ।
सीताराम भन्छन्, ‘भूकम्प नगएको भए सायद हाम्रो फाउन्डेसन जन्मिने थिएन । संस्थागत रुपमा सामाजिक काममा सक्रिय हुने थिएनौं होला ।’
सीताराम त्यो कहालीलाग्दो भूकम्पले नेपालीलाई ठूलो पाठ सिकाएको बताउँछन् । ‘हामी सबैको हैसियत समान हो । लोभ, डाहा गरेर हुँदैन भन्ने पाठ सिकायो,’ उनी थप्छन्, ‘भूकम्पले जनधनको क्षति त गर्‍यो तर अब सचेत हुनुपर्छ । विकासप्रेमी हुनुपर्छ भन्ने पाठ पनि सिकायो ।’
तर घटना सेलाउँदै गएपछि मानिसहरूले ती कुरा बिर्सिदै पुनः स्वार्थको पछाडि दौडिने प्रवृत्तिप्रति भने चिन्ता लाग्ने सीताराम बताउँछन् ।
सङ्कटको घडीमा नै मानवताको परीक्षण हुन्छ- प्रधानमन्त्र...